Naya Post Nepal | कसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्दैन ? जानि राखौ – डा. नुतन शर्मा
पछिल्लो समय अशु/रक्षित यौ, न स, म्पर्कका कारण ग’र्भप’तन गर्ने किशोरीहरुको संख्या बढ्दै छ । शिक्षित भएर पनि बिना अस्थायी साधनको प्रयोग हुने यस्तो अ,शुरक्षित सम्पर्कले गर्दा किशोरी अवस्थाबाटै महिलाहरुमा समस्या हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यस्तै प्राचिन समयमा पनि गर्भवती भएनभएको टेस्ट गर्ने चलन थियो । त्यतिबेला गहुँ वा जौँमा पिसाब मिसाउने । यदि उक्त गहुँ वा जौँ टुसाएमा गर्भवती भएको संकेत गर्ने चलन रहेको थियो ।
यस्तै अर्को तरिका बाट पनि गर्भ जाँच गर्न सकिन्छ ।यस्तै प्राचिन समयमा पनि गर्भवती भएनभएको टेस्ट गर्ने चलन थियो । त्यतिबेला गहुँ वा जौँमा पिसाब मिसाउने । यदि उक्त गहुँ वा जौँ टुसाएमा गर्भवती भएको संकेत गर्ने चलन रहेको थियो । यस्तै अर्को तरिका बाट पनि गर्भ जाँच गर्न सकिन्छ ।
२०७८ माघ २८, शुक्रबार प्रकाशित0Minutes 1371 Views